Sunday May 12, 2019 - 15:12:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qoraaga Max'med Suldaan Garyare ayaa tacliiqiyay shirkii fashilka kusoo idlaaday ee hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Garoowe.
Garyare waa qoraa Soomaaliyeed oo madax banaan
Kalimaddan ama hawraartan ayaa ahayd hawraar horey loo bixiyey ama fal ahaan u dhacday. Erey siyaasadeedkan (political term) ayaa lagu xaman jirey in ay go’aan iyo qorsheba u ahayd xukaamta ama madaxda dalalkan Carabta marka ay doonayaan in ay go’aan ka qaataan cadaawadda Yuhuudda. Taas oo muujin jirtey in aysan marnaba ku heshiin wax weyn oo Yuhuudda dhib u keeni kara ama dagaal ka la hortagi kara dhibaatada ay ku heyso dadka Muslimiinta ah oo reer Falastiin ka mid yihiin kana dhiidhin kara dhibkaas. Menachem Begin, oo dhammaadkii sannadihii 1970aadkii mar ahaa madaxa wasiiradda (Prime Minister) ee Israel ayaa loo sheegay in Carabi heshiisey, kuna heshiisey in ay dagaal ku qaadaan Israel.
Menachem Begin waxa uu ku jawaabay hadalkaas Carabi kuma heshiin ee waxa ay ku heshiiyeen in Umu Kaltuum ay cod macaan tahay. Umu Kaltuum waxa aya ahayd habar fanaanad ah oo dalka Masar ka heesta madaxda Carabtuna aad u jeclaayeen codkeeda. Sidaa si le’eg waxa maanta muuqata in kuwo dad badani u arkaan in ay yihiin madax Soomaaliyeed aysan waxba ku heshiin karin xataa cidda ay u arkaan cadawgooda in aysan go’aan ka qaadan karin, balse ay ku heshiin karaan in aysan waxba isku raacin.
Dad badan ayaa beryahan ku doodayey shirka Garoowe beesha caalamka (gaaladu) waa ka maqan tahay balse waxa soo if baxday in aysan waxba isku raaci karin haddii aan gaaladu ku dhex jirin, taas oo calaamad u ah in waxa lagu heshiinayaa ay beesha caalamku wadato balse aysan ahayn mid madax Soomaaliyeed wadan karaan ama ay wataan dan Soomaaliyeed iyo mid muslinna dani ugu jirin.
Halkan ka eeg isha Qormada Guji
Askar ka goosatay maamulka 'Jubbaland' oo isku dhiibay Al Shabaab.
Diiradda Jimcaha oo looga hadlay dagaalada Qabaa'ilka iyo waxa soo Celceliya.